Vaovao - Fantaro bebe kokoa momba ny tantaran'i Meari
Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. no mpamokatra vokatra eran-tany an-trano. Meari dia mifantoka amin'ny haitao mandroso toy ny teknolojia video, AI, IoT, sehatra rahona. Amin'ny maha orinasa mampifandray ny R&D, marketing, ary kojakojam-pamokarana, Meari dia manome vahaolana an-tsarimihetsika an-trano tokana.
Meari Technology dia manolo-tena amin'ny famolavolana sy famokarana vokatra an-tsarimihetsika an-trano ary hiezaka hanome ny mpanjifa manerantany vokatra an-trano avo lenta, vahaolana fiarovana an-trano tokana ary serivisy namboarina tsara.
Mifantoka amin'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny haitao vaovao izahay ary mandefa vokatra an-tsarimihetsika an-trano feno fahendrena, ao anatin'izany ny fakantsary anaty trano, fakan-tsary an-kalamanjana, fakan-tsary mitongilana, fakan-tsarimihetsika batterie, baravarana marani-tsaina, fakan-tsarimihetsika, fanaraha-maso zaza, ary modely video IoT.
Tamin'izany fotoana izany dia mbola ekipa kely misy olona am-polony izahay, ary namolavola ny vokatra voalohany tao amin'ny biraonay Hangzhou.
Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa an-jatony izahay ary manangana sampana any Eropa. Ny vokatra sy serivisinay dia manarona firenena sy faritra maherin'ny 150, ary niditra tao amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana lehibe fanta-daza any Eropa sy Amerika, toa an'i Walmart, Best Buy, Home Depot, Kingfisher, ary MediaMarkt. Ny fandefasana isan-taona dia mahatratra am-polony tapitrisa, manompo mpanjifa am-polony tapitrisa manerantany.
Ny ekipa mpanorina ny Meari Technology dia misy manam-pahaizana momba ny R&D zokiolona, ​​manam-pahaizana momba ny fandraharahana ary manam-pahaizana momba ny famatsiana manana traikefa manan-karena amin'ny sehatry ny home smart, IoT ary ny teknolojia video nandritra ny roapolo taona. Ireo mpikambana fototra dia avy amin'ny orinasa mpiaro ny fiarovana, IoT ary AI.
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny taona maro, Meari dia nanangana ekipa R&D matanjaka. Amin'izao fotoana izao, maherin'ny 40% ny mpiasan'ny orinasa dia avy amin'ny departemanta R&D, ao anatin'izany ny famolavolana interface interface, ny famolavolana indostrialy, ny famolavolana rafitra, ny famolavolana fitaovana, ny rindrambaiko tafiditra, ny app, ny cloud platform ary ny mpizara sns.
Niorina tany Hangzhou i Meari.
Hamarino amin'ny ISO 9001 sy ISO 14000.
Ny vokatra dia niditra tao amin'ny tsena Eoropeana sy Amerika Avaratra.
Hamarino amin'ny BSCI.
Ny vokatra dia niditra tamin'ny sehatra fivarotana toa an'i Walmart sy Kinfisher.
Nanomboka niditra tao amin'ny tsena aostralianina, japoney ary koreana.
Hamarino amin'ny RBA.
Nahazo ny fanamarinana teknolojia avo lenta nasionaly.
Nomena anarana ho an'ny orinasa Forbes Top 100 AIoT.
Tsena nanokatra tany Amerika atsimo, Azia atsimo atsinanana ary India.
Namoaka karazana varotra an-trano an-tsokosoko feno, izay amidy am-paosy ny vokatra azo avy amin'ny bateria.
Nanangana sampana tany Eropa.
Ny fandefasana entana isan-taona dia niditra voalohany tamin'ny indostria.
Mitohy amin'ny famoahana ny vokatra mandeha amin'ny bateria ary ny Baby Monitor.
Nahazo ny loka Evergreen avy amin'ny Magazine ara-bola.
Nahazo ny loka Red Dot Award ary ny IF Design Award ny vokatra andian-dahatsary optika.
Meari dia manaraka ny fitsipiky ny serivisy "miorina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ny R&D ho fotony", ary miezaka ny hanome ny mpanjifa tsirairay serivisy vahaolana fiarovana avo lenta, mety, ary mijanona iray.
Amin'ny maha orinasa mifototra amin'ny haitao azy, Meari dia manana andiana teknolojia fototra amin'ny sehatry ny fanaraha-maso horonantsary marani-tsaina, ao anatin'izany:
Famolavolana endrika novelarina
Fomba fanodinana tena tsara
Algorithma Rocessing ISP
Fifanarahana amin'ny tambajotra manan-tsaina
Meari dia manana tsipika famokarana horonantsary feno, ao anatin'izany ny fakan-tsarimihetsika anatiny (Mini series), fakan-tsary PTZ anaty trano (Speed ​​series), fakan-tsarimihetsika ivelany (Bullet series), fakan-tsary PTZ ivelany, monitor Baby, fakantsary bateria (Snap Series), fakan-tsarimihetsika ambaratonga (Andian-dahatsoratra Bell), fakantsary jiro (andiam-panidinana), ary modules video mifanaraka amin'ny vokatra an-trano hafa toy ny garage, feeders biby, hidin-varavarana marani-tsaina sns
Mandritra izany fotoana izany, Meari dia manohana vahaolana feno amin'ny fidirana amin'ny vokatra IoT, mamela ny mpanjifa hampiasa APP iraisana hitantanana karazana vokatra an-trano marani-tsaina.
Omeo vokatra an-trano mahaliana izay gaga ny mpanjifa.
Tonga orinasa teknolojia manana fifaninanana eo amin'ny tsena manerantany.
Fotoana fandefasana: Mey-17-2021